Madaxweyne Deni oo si cad u sheegay Ciqaabta Ragii Kufsaday Caasho Ilyaas!! - Muqdisho Online
Home Wararka Madaxweyne Deni oo si cad u sheegay Ciqaabta Ragii Kufsaday Caasho Ilyaas!!
Madaxweyne Deni oo si cad u sheegay Ciqaabta Ragii Kufsaday Caasho Ilyaas!!
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maalinimadii shalay xafiiskiisa ku qaabilay Ilyaas Aadan oo ah aabaha dhalay Caaisha Ilyaas Aadan oo dhowaan lagu kufsaday kadibna lagu diley gudaha magaalada Galkacyo.
Siciid Cabdullaahi Denni Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa Ilyaas ugu horayn markale uga tacsiyeeyye falkii foosha xumaa ee gabadhiisa lagula kacay, wuxuuna sheegay in dhammaan dowladda iyo shacabka Puntland ay la qaybsanayaan murugada.
Dhinaca kalena, madaxwyenaha dowladda Puntland ayaa sheegay in dedaal dheer kadib laamaha ammaanka Puntland ay gacanta ku soo dhigeen raggii ka dambeeyey dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee lagula kacay Caaisha isla markaana caddaalad la horgeyn doono.
Previous articleMareeykanka oo ka hadlay Duqeeyn ka dhacday Sh/hoose
Next articleReforms in Kenya energy, oil sectors